I-Afrika liya ngokuliyishonela kuma-Olympics - Bayede News
Uthisha wabulala umfana wami
Nakulama-Olympics alo nyaka kubukeka eya ngokumfimfa amathuba okuthi kungaba khona izwe e-Afrika elizosonga lo mqhudelwano lifinyele okungenani ezindondweni ezili-15
EMLANDWENI wamazwe akulelizwekazi kuma-Olympics yiKenya kuphela eyake yanqoba izindondo ezili-14. Lokhu kwenzeka kuma-Olympics ayedlalelwa eBeijing, eChina. Yakwazi ukuthola ezegolide aziyisi-6, ezine zesiliva nesibalo esifanayo kwezethusi.
Zonke lezi zindondo yazithola emdlalweni wokusubatha. Ngalo nyaka iNingizimu Afrika yangena kwelikhulu ihlazo njengoba yathola indondo eyodwa qhwaba. Kwaba ngeyesiliva. IKenya kuma-Olympics alandela abedlalelwa eLondon, e-England yalehlisa izinga njengoba yakwazi ukunqoba ezili-11.
Cishe okwenza amathuba okunyuka kwezindondo ezinqotshwa ngawase-Afrika ehle wukuthi sekusele imidlalo embalwa kwajwayele ukwenza kahle kuyo. Lapha kukhulunywa ngezokusubatha. Ukugxila kwamazwe ase-Afrika ezinhlotsheni ezimbalwa zemidlalo kubukeka kuyiyona mbangela enkulu yokuthi ahlale egoduka nezindondo ezimbalwa.
Leli phephandaba lilobe lapha kuyiKenya evela kuqala kwawase-Afrika ekuklelisweni kwamazwe ngokwezindondo. Ilele indawo ye-18 ngezinhlanu. Elakuleli lisendaweni yama-31 ngeziyisi-7. Okwenza iKenya ibe phezulu wukuthi inezimbili zegolide uma kuqhathaniswa nelakuleli elioneyodwa.
I-Ethiopia ilele kweyama-42 ngezindondo ezine. I-Algeria ikweyama-57 ngeyesiliva eyodwa. I-Egypt ikweyama-65 ngezimbili zethusi bese iMorocco neTunisia babe kweyama-67 ngeyodwa yethusi. Kubadlali basemazweni okulindelwe ukuthi banganyusa izindondo kubalwa iqembu lehandball lase-Angola elizodlala owamaqaurter final neRussia kusasa ngoLwesithathu ligamenxe elokuqala ekuseni.
UDawut Seyaum wase-Ethiopia noFaith Chepngetic waseKenya bazogijima kowamanqamu wewomen’s 1500m ligamenxe elesithathu ekuseni kusasa. Ngelesi-3 khona kusasa ekuseni uBlessing Okagbare waseNigeria noMarie-Josee Ta Lou wase-Ivory Coast bazogijima awandulela amanqamu webanga lama-200m.
Kowamanqamu welama-300m steeplechase, kuzobonakala u-Ezekiel Kemboi waseKenya noSoufiane Elbakkali noHamid Ezzine baseMorocco ligamenxe elesine ntambama. Elakuleli selithembele kwabafana noCaster Semenya kwelama-800m kwabesifazane, UWenda Nel noL.J. van Zyl kwelama-400m hurdles.
nguSabelo Maphumulo Aug 16, 2016